Maaha wax cabsi leh haddii aadan mid lahayn, maxaa yeelay ma adkaan doonto in suurtagal ahaan lagu helo adoo ku qoraya qoraalka kumbuyuutarka adoo adeegsanaya baahin khaldan. Sidee ayey u qosol badan tahay in lagu wada hadlo sheeko fiidiyoow ah, loo diro waraaqo jaceyl ah iyadoon xitaa la carqaladeyn doonin fiidiyaha la baahinayo
Wadahadalka fiidiyowga ee 'Roulette chat' oo gabdhaha lala yeesho 18 sano ka hor ayaa loo arkay inuu yahay wax aan caadi ahayn. Maaddaama aysan jirin kamarad webka, makarafoon kumbuyuutarka ... Isla markiiba waa la oggol yahay in la sii wado wadahadalka sida la doonayo. Markuu muujiyey xiisaha maqaalka - taariikh yar. "Rulet" videochat - magaca ayaa hadda caan ku ah, laakiin miyaad ka fikirtay taariikhda asalka magaca? Qeexitaanka waxaa lagu sharaxay qaab dabacsan, qaab dhismeedkiisa aan caadi ahayn: isku darka awoodaha waxaa loo fuliyaa sidii ciyaar caadi ah oo lambarada iswaafajiya. Lama saadaalin karo, laakiin mararka qaarkood lama filaan. Qofka kaa soo horjeedaa waxaa si toos ah loogu xushay barnaamijka, waxaad ku xireysaa wada-hadal aan kala sooc lahayn. U jeesashada khayaaliga - dareemo farxaddan ajnabiga ah ee ka timaada meel kale, fahan farqiga u dhexeeya masaafada - wuxuu u badan yahay inuu ku sugan yahay qaarad ay u badan tahay.Iyo cabirka indhaha weyn - aragtida deris ama qaraabo shaashadda ... Kaftanka maahan mid caadi ah oo wuxuu u dhigmaa 1: 100000 xaaladood. Sababta ay u gaarka tahay awgeed, waxaa loogu yeeraa "random". Isku soo wada duuboo - sida nasiibku yahay, marka loo eego dhinacyo kale, sida ciyaarta nasiibka ee caadiga ah. Daal wadahadalkan - bilow raadinta kan xiga ee twitter, haddii aadan jeclayn - raadso markale markale ilaa aad ka hesho waxaad rabto. Dhaqdhaqaaqa horusocodka ah iyo howshu waa kuwo soo jiidasho leh, sida caadiga ah isma jeexi kartid. Nooc ka mid ah ciyaarta, balwad iyo xiiso leh. Waa wax dabiici ah in lumiyo waqtiga, sida dhaqsaha badan ee waqtiga firaaqada. Waxaad raadineysaa kheyraad aad kuheli karto jawi jaceyl leh adeegsi fudud - "mashruuc xiriir caadi ah" - adiga. Wadahadalka caalamiga ahi waa dhacdo caan ah oo caan ah, oo soo noqnoqotay sanadihii la soo dhaafay. Qof aqoon u yeelo,ku noolaanshaha ka soo horjeedka barta adduunka - hadda xaqiiqda, xod-xodashada fudud ama saaxiibtinimada - waxaa lagu gaari karaa mahadsanid xiriirka caalamiga ah. Khibrad lama iloobaan ah, shucuur, garasho leh dhalasho ka duwan, waad dareemi kartaa, xusuusataa intaad nooshahay. Ku celcelinta shisheeyaha laguma khasaarin doono. Dareenka muuqda ayaa ka tagi doona raad aan la tirtiri karin. Dad badan, waxaa jiri doona dhibaato aan laga gudbi karin - lahjada wada hadalka. Waxaa jira dad badan oo polyglot ah wayna adag tahay in si fiican loo ogaado luqadda dalalka kale ee adduunka. Raadinta qof aad lahadasho waa arrin 2 ilbidhiqsi ah, laakiin in la fahmo waxa uu sheegayo durba waa dhibaato ... Waa lama huraan inaad adigu sharraxdo oo aad naftaada sharaxdo. Dadka jecel luqadaha ajnabiga ah way ku farxi doonaan dhaqanka fudud ee aan la beddeli karin, waa inaad ogolaataa. Hagaag, hada, aan dib ugu noqono xididkii - tiro aad u tiro badan ayaa raba kala duwanaansho ku saabsan sheekaysiga, oo aan kor loo qaadin aqoontooda ...waxaa fiican inaad isticmaasho aqoonta ereyga asalka ah iyo kan ugu jecel Ruushka. Wadahadal fiidiyow oo casri ah oo Ruush ah ayaa loo sameeyay dhagaystayaasha bartilmaameedka ah. Websaydh la heli karo oo loogu talagalay aragtida ayaa suurtogal ka dhigaysa in la helo qof ku adeegsaday isla luuqadda hadalka isku mid ah. Caadi ahaan, xaaladdan, wadahadallada lala galayo isaga ayaa sii socon doona iyada oo aan wax caqabado ahi jirin. Isfaham wada jir ah oo leh isbarasho cusub oo rajo leh, waqti aad u badan lagu qaatay, mowduucyo kala duwan - kuu oggolaan maayo inaad ku caajiso sheekada fiidiyowga ee aad ugu jeceshahay, laakiin waxay kuu keeni doontaa farxad, fudayd aad xusuusan doontid markaad ka fog tahay isku xirka internetka.Caadi ahaan, xaaladdan, wadahadallada lala galayo isaga ayaa sii socon doona iyada oo aan wax caqabado ahi jirin. Isfaham wada jir ah oo leh isbarasho cusub oo rajo leh, waqti aad u badan lagu qaatay, mowduucyo kala duwan - kuu oggolaan maayo inaad ku caajiso sheekada fiidiyowga ee aad ugu jeceshahay, laakiin waxay kuu keeni doontaa farxad, fudayd aad xusuusan doontid markaad ka fog tahay isku xirka internetka.Caadi ahaan, xaaladdan, wadahadallada lala galayo isaga ayaa sii socon doona iyada oo aan wax caqabado ahi jirin. Isfaham wada jir ah oo leh isbarasho cusub oo rajo leh, waqti aad u badan lagu qaatay, mowduucyo kala duwan - kuu oggolaan maayo inaad ku caajiso sheekada fiidiyowga ee aad ugu jeceshahay, laakiin waxay kuu keeni doontaa farxad, fudayd aad xusuusan doontid markaad ka fog tahay isku xirka internetka.
Waxaan jeclaan lahayn inaan dareenkaaga u soo qaadno kan ugu caansan, uguna booqashada badan fiidiyowga internetka ee Ruushka - chat roulette. Waqti si raaxo leh ku qaatay, oo leh adeeg tayo sare leh oo goobta ah, ayaa kaa dhigi doonta inaad dareento qof aad loo jecel yahay, qof lagama maarmaan u ah adduunka. Dadka aqoonta kuu leh ee cusubi way ku farxi doonaan inay mar kale kugu arkaan fiidiyaha, shaqsi ahaan. Taxaddarrada ha ka tuurin madaxaaga. Ha aaminin shisheeyaha. Adeeg ahaan, waxaan ku faraxsanahay inaan ku aragno oo waxaan kaa caawinaynaa inaad xalliso wax dhibaato ah oo ku saabsan waxqabadka adeegga.
Si looga fogaado guul darrooyinka daahfurka ee joogitaanka noocyada ujeeddooyinka xunxun - in la bilaabo isgaarsiinta, ka hor inta aan la adeegsan wada sheekaysiga fiidiyowga - loo maro diiwaangelin sahlan. Waqti badan ma qaadaneyso, ha ka welwelin. Taas bedelkeed, waxay fududeyn doontaa habka shukaansiga iyo wada xiriirka. Ha rumaysan - markaa u gudub naqshadeynta hadda si aad u hubiso.
Kuwa jecel inay sheekaystaan, waxaa macquul ah inay ku xirmaan makarafoon. Qaabka wada hadalka waxaa badanaa ku amaanan gabdhaha. Waxay jecel yihiin inay "dhagahooda ku dhacaan" - waxaanan u maleynayaa in tani aysan ahayn war. Wadahadalka xiisaha leh waa wakhti si sharaf leh loo qaatay sidoo kale faa'iido leh. Tani waxay keeneysaa shukaansiga internetka ee umuuqda midka ugu macquulsan midka dhabta ah. Xuquuqda aad u leedahay inaad aragto qofka aad la hadlaysid waa faa iido weyn, laakiin xaqiiqdii wax lacag ah kuma fadhido iyadoo aan cod la maqlin, laga dhageysto shaashaddaas qarsoodiga ah ... dabeecada, saadaalinta fikradaha.
Khubaradu waxay isku dayeen inay sare u qaadaan astaamaha waxqabadka ee kheyraadka illaa heerka ku habboon, si ay u sameeyaan isbarasho aan caadi ahayn iyagoo ku daraya isticmaalaha liiska asxaabta (haddii aad runti leedahay nooc ka mid ah u damqashada wadaha oo aad dareento inaad dooneyso inaad wadahadal sameyso ku celcelin ama si fudud ma dooneyso inaad lumiso xiriirka shakhsiga). Xaaladdan oo kale, waa aasaasi in la ogaado goorta macmiilku mar kale la xiriiri doono si uu dib ugula xiriiro xiriirkiisa. Sidoo kale, sida mashaariicda bulshada - waxaan fursad u leenahay inaan is dhaafsanno hadiyadaha. Waxa loo baahan yahay waa in la iibsado qadaadiic dalwaddii. In jacayl sidan loo muujiyo waa tilmaam ugu sarreysa, jawi cidhiidhi ah. Ma aha in qof kastaa hadiyad u siin karo macmiil lagu sheekeysto fiidiyoow, maaddaama qof kastaa uusan awood u lahayn deeqsinimada, iyo mudnaantaas oo kale ayaa ka farxisa kan hadiyaddan la siiyay. Daacadnimada dareenkawaxaan kuugu hambalyeynayaa dhacdo muhiim ah ama kaliya inaad shaqsi kuu raaxeyso.
Fariin fiidiyoow ah oo laga duubay bogga ayaa noqon doonta qaab aan caadi ahayn. Kani waa nooc ka mid ah muuqaalka fiidiyowga, kaas oo aad ku barato naftaada, wax yar ka sheeg naftaada, xiisaha daawadayaasha "fiidiyowga fiidiyoowga". Muuji shucuurtaada, ha ka waaban inaad u sheegto kaamerada waxa ku saabsan faa'iidooyinkaaga iyo qasaarooyinkaaga, wixii ku saabsan shuruudaha la doonayo ee ay tahay inuu noqdo lamaanahaaga nolosha mustaqbalka. Ama iska cadee oo kaliya.
Si aad u muujiso qanacsanaantaada - dhagsii shaashadda shaashadda "bogaadin" - waad dhiirrigelin doontaa qofka kaa soo horjeeda. Sidaa darteed, waxaad muujin doontaa oggolaansho, waxaad awoodi doontaa inaad muujiso raaxo iyo naxariis, taas oo, si waafaqsan, ay tahay inay isla markiiba keento jawaab. Tilmaamkan waxaa lagu tusi karaa xaalad kasta oo ku habboon: fikir si qosol leh loo muujiyay, aragti hibo leh oo la soo bandhigay, ficil kasta oo soo jiidasho leh oo ku dhacay dareenka sharafta leh ee erayga "dhicitaan."
Ha moogaan xaqiiqda ah inuu awood u leeyahay inuu muujiyo diidmada. Haddii aan la oggolaan, oo aan la cafin karin, xadgudub cad oo ku saabsan tilmaamaha sheekaysiga fiidiyowga ayaa la arkayaa - fayl garee cabasho wakhti kasta. Marka lagu daro xaqiiqda ah in wada-hadalka uu fahmi doono inay khaldan yihiin, waxaan sidoo kale heli doonaa cabasho waana hubin doonaa inaan tixgalino isla markaana aan tallaabo ka qaadno isla markiiba. Waan u mahadcelin doonaa caawimaaddaada dagaalka lagula jiro kuwa xadgudbay, sidaa darteed waxaan ka ilaalin doonnaa wada hadalka fiidiyowga kaqeybgalayaasha diidmada ah ee aan ixtiraameynin naftooda iyo qaabdhismeedka loo dejiyey, iyo xitaa in ka sii badan - waxay kugu xumeynayaan qof ahaan.
Bilowgii (horeyba kor ayaan ugu soo sheegnay) - waxaa la soo jeediyay in la diiwaan geliyo. Hawshu waa inay la yimaadaan oo wax ku qoraan aagagga la cayimay "naanaysta" - magac ku jira sheekada, oo ay ku garan karaan. Muhiim maahan in la qoro magacaaga iyo magaca qoyskaaga - waa ku filan tahay inaad la timaado magac qosol badan, oo ah magaca aad in badan ku riyootay, naanaysta xayawaanka aad jeceshahay - guud ahaan, taas oo la aqrin karo. Iyo naanaysta asalka ah ee lama ilaawaanka ah waxay dammaanad ka tahay inaadan iloobi doonin lana helin mudo kadib. On site - aad noqon kartaa gabi ahaanba aan la aqoon oo aan ka walwalin roulette chat chat.
Ma jecli muuqaalka is-dhexgalka? Adigu si madax-bannaan ayaad u dejisaa goobaha loogu talagalay muujinta dibadda, midabka midabka, waxaad doorataa midabadaas fadlan, ha fara-gelin. Luqadda iyo bandhigiisa ayaa loo dejin karaa markay doonaan, waxay isticmaalaan Ruush, laakiin xulashadu waxay ku jirtaa gacantaada, sida ay yiraahdaan. Adeegsiga sheeko fiidiyow ah oo aan kala sooc lahayn ayaa keeni doonta farxad ugu badnaan, haddii aad ku jirto jawi la doonayo oo raaxo leh!
Shuruud muhiim u ah qiimeynta barnaamij ama mashruuc kasta waa tayada qaabeynta iyo qorista. Si kale haddii loo dhigo, maareynta ugu habboon ee barnaamijka, waxaa lagama maarmaan ah in looga shaqeeyo sida ugu macquulsan. Ha iloobin in macaamiisha booqata kheyraadka - aad u baahan tahay inaad dhaafto dhibaatooyinka iyo guuldarrooyinka dhaca, xitaa way ka sii wanaagsan tahay ka hortagga dhacdadooda. Si toos ah rooti wada sheekeysiga fiidiyowga ayaa gebi ahaanba lagu hubiyaa barnaamijka ugu casrisan ee anti-virus, kaas oo aan u oggolaan doonin jabsiga nidaamkayaga. Diiwaangelinta qasabka ah - dadka shakiga leh ee fikradaha xun - si fudud ayaa loo nacaa. Iyagu ma muujinayaan rabitaan ah in lagu buufiyo wax aan micno lahayn oo ka taga bogga, taas oo ka tagaysa sheekada fiidiyowga si loo helo "faa'iido" ka sahlan. 99% si aad ugu raaxeysato bey'ad aamin ah una hurto inaad hesho waxa wanaagsan. Kala-bax la'aanshukaansi iyo niyadda kaamil ah - tani waa daaweynta kalinimada aan siinno martidayada.
Marka la marayo nidaamka, booqdayaashu waxay xaqiijinayaan heshiiska ay la leeyihiin xeerarka isticmaalaha. Haddii aad ku raacsan tahay heshiiska, markaa waxaad oggolaatay inaad si edeb leh ula dhaqanto oo lagula xisaabtamo ficilladaada, inaad noqoto mid macquul ah oo waafaqsan dhammaan xeerarka anshaxa. Dhinacayaga - waxaan damaanad qaadeynaa sir ahaanta macluumaadka aad sheegto. Sidoo kale waa masuuliyadeena inaan hubino raaxada wada sheekeysiga fiidiyowga ah.
Waxaan dooneynaa inaan ka farxino dadka nagu wareegsan. "Maxay siin doontaa?" - qof baa ku weydiin doona. Jawaabtu way fududahay: waxay kaa caawin doontaa helitaanka shaqo, helitaanka jilayaal cajaa'ib leh oo noqon doona isbarasho iyo saaxiibbo wadahadal dartiis; qofna kama badbaadi karo "wadnaha garaac" lama filaan ah, maadaama qeybtii labaad ay nala kulmi doonaan - haa, horey ayey u jireen kiisas noocaas ah, waxaan ku sharixi doonnaa labo sheeko oo hoose - si aan tusno tusaalooyin nolosha ka mid ah. Ku socodsi wadahadalka si karti leh, iskuday inaad dhageysato oo aad "maqasho", adigoo dhoolla caddaynaya una jawaabaya si naxariis leh wadaha. Hoog, maado kasta ma aha mid si sax ah ugu dhaqanta xaaladaha noocaas ah ... maxaa la sameeyaa? Sidee loo jeclaadaa? Jawaab: tababar iyo carbis badan!
1) Muujinta xishood ee fikirka, hadal aamusnaan iyo gaagaaban ... maxaad u malayn - tani waxay xiisayn doontaa wejiga dhinaca kale ee shaashadda? Ma la ogaaday? - "Talo soo jeedin": in la bilaabo ku dhaqanka ku hadalka, ku dhawaaqida iyo codka. Xusuusnow: waxaad u baahan tahay in lagu maqlo! Waa inaadan cabsan, isku day inaad kaqeyb gasho qoob ka ciyaarka, karaoke - naftaada sii xorriyad! Marka waxaad heli doontaa kalsooni waana lagaa xoreyn doonaa.
2) Taas bedelkeeda, aad u hadal badan? Kuwa yaqaanna ma caayaan ama ka fogaadaan asxaabta? "Erayada kala tagga": Hakad geli doodaha, baro inaad xiiseyso dhacdooyinka rakaabka. Dhageyso, weydii su'aalo - sidaas darteed iyaga la hadal. Dadka hareerahaaga ah waxaa loogu yeeraa inay fahmaan inaad xiisaynaysid oo aadan dan ka lahayn iyaga. Lovers inay wax u sheegaan, maqalina. Haddii aan tallaabooyinka la qaadin - dhageystaha kaliya ayaa noqon doona ... Haa - adigu laftaadu.
3) "Tilmaamaha" - cilad lagu ogaado adduunka ... Markay sabab leedahay iyo sabab la'aan - tilmaam. I aamin - badankood waa "dhib". Qof kastaa wuxuu leeyahay madax u gaar ah oo kaliya ma faafinayo talo. Ma ogaanaysid, laakiin waxaad ku seexanaysaa talo qiimo leh. "Bixi": Ujeeddo deji: haddii aad qof la talinayso, markaa keliya markii loo baahdo, haddii qofka ka soo horjeedaa laftiisu weydiiyo. Marka way qaddarin doonaan - si kastaba ha noqotee!
Wadahadal fiidiyow oo Ruush ah oo bilaash ah - oo loo heli karo qof walba
Waxaan hubnaa in ficil ahaan uusan qofna ka fikirin qiimaha dayactirka serverka iyo qalabka kale markii aad soo degsaneyso softiweerka. Waxaan rabaa sheekaysiga fiidiyowga inaan iyaga lacag laga qaadin. Laakiin ka fikir - hal milyan oo qof ayaa ku wada xiriirta ilaha, waxay u shaqeyn doonaan si aan kala go 'lahayn, oo leh tayo sare. Faa'iidada weyn ee sheekaysiga fiidiyowga ayaa ah xorriyadda isticmaalka, oo aan asal ahaan soo bandhigno. Waxaa jira bogag badan oo loogu talagalay shukaansiga, dhammaan noocyada sheekaysiga, shirarka, laakiin waxaad u baahan tahay inaad bixiso. Tusaale ahaan, lacag ku wareejinta lacag bixinta elektaroonigga ah ama dirista SMS, laakiin si kasta oo aad u eegto, tani waa xaqiiqo. Hadda aan tixgelinno dalabkeenna - waxaa laguu soo bandhigayaa sheeko fiidiyow oo casri ah oo bilaash ah oo tayo sare leh! Uma baahnid inaad wax lacag ah ku bixiso waqtigaaga gaarka ah. Madadaalo madadaalo ah, oo ay weheliso barbar socda, iyada oo aan la gelin maalgashi maaliyadeed.
Ka heshay aqoonsi baahsan internetka. Roulette chat chat-ka ayaa soo bandhigaya shaqooyin, cusbooneysiinaya barnaamijka - si loogu sahlanaado. Kheyraadka waxaa maalin walba u baahan dadka deggan dalal aad u tiro badan (wadar ahaan, in ka badan 1 milyan oo tirooyin)! Tirada dadka isdiiwaangaliyay ayaa kordheysa maalin kasta. Haddii aad maalin kasta aaddo, waxaad la kulmi kartaa wajiyo cusub iyo kuwo cusub! Waxaad la kulmi doontaa dad isku fikrad ah oo ku taageera adiga iyo ra'yigaaga; waa inaad kala hadashaa arrimo xiiso leh, oo muran leh. Waa maxay mawduuca lagu sheekaysanayo fiidiyowga? Haa, maya midna! Helitaanka mowduucyo kala duwan ayaa lagu daray. Ma jiraan wax xaddidan oo ku saabsan mugga farriimaha qoraalka iyo hanuuninta ereyga, ma jiro lambar labis ama qaabab kale oo loo baahan yahay. Is daji oo naftaada uun noqo, la kulan oo baashaal. Waxaan kugula talineynaa aqrinta iyo akhlaaqda. Si loola hadlo si la mid ah sida dhabta, sharciyada wadahadalka asluubta waa isku mid meel kasta:cilmiga, waxbarashada, hadalka si sax ah loo soo gudbiyay - taasi waa waxa lagu qiimeeyo wax walba. Markaad isu muujisay inaad tahay qof aan caadi ahayn oo heer sare ah, isu muuji inaad tahay noole daacad ah oo furfuran, adigoo caddaynaya inaadan caajis ka ahayn inaad la hadasho. Ballaari wareeggaaga sheekaysiga fiidiyowga. Laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa weli ah - inaadan iska dhigin nooc kale, inaad adigu iskaa u noqoto.
Adoo adeegsanaya sheekaysiga fiidiyowga, naftaada ku arag tababarka ku saabsan saxda ah ee "dhaqanka bulshada". Xaqiiqda, waxaad tahay qof xishood badan oo ka waaban inaad is muujiso, horayba waad ugu baratay. Haddii aad u isticmaasho degelkeenna iyo dib-u-wada nooleyntiisa si buuxda, waxaad si fudud naftaada ugu tababaran kartaa xirfadaha shukaansiga, fahmi kartaa mabda'a habdhaqanka dadka aan la aqoon. Khibrad aan la beddeli karin ayaa u adeegi doonta sida "cashar" cajaa'ib leh oo ku saabsan dadka aqoonta u leh dhabta ah Maskax ahaan waxaad diyaar u noqon doontaa inaad la kulanto dhibaatooyin aad kaga soo gudubtay heer anshax - ma jiri doonaan caqabado. Tababbarku qofka wuu u fiican yahay. Mana aha oo kaliya nidaamka barashada, laakiin sidoo kale waxay noqon doontaa wax lagu farxo in waqti firaaqo ah lagu qaato shirkad madadaalo leh. La sheekaysiga dadka wanaagsan waxay kaa dhigeysaa inaad dareento farxad, baashaal, iyo faa'iidooyinka wada xiriirka. Ka hadalka sheekaysiga fiidiyowga - waxaad fursad u heli doontaa inaad ka baxsato welwelka maalin kasta,kuwaas oo horeba u caajis ahaa.
Isgaarsiinta internetka waxay siisaa fursad aad ku muujiso naftaada, gabi ahaanba gebi ahaanba Sheeko ku saabsan naftaada iyo nolol xiiso leh - ayaa iska tuuri doonta barroosinka kelinimada ee nafta. Sheeko kasta - waxaa lagu dhagaysan doonaa xiisaha, iyo u sheegida jilayaasha la cusbooneysiiyay - waxaad daawan doontaa muuqaalka dhiirigalinta markasta. La wadaag dhibaatadaada, weydiiso hagitaan, weydiiso taageero anshax ah - waxaadna dareemi doontaa diirimaad saaxiibtinimo (haddii aad aaminto, dabcan). Way kafiican tahay "inaad nafta u shubto" dabeecad aan aqoon, iyadoo meel fog laga joogo - waana wax cajiib ah. Kuma lihid qof. Laakiin fadlan ha ilaawin inuu jiro qaab dhismeed aamin ah. Dhamaan isku mid - gabi ahaanba waa aadan aqoon, si kastaba ha noqotee, waxaad dooneysaa inaad si fiican u ogaato.
Waxay badanaa u dhacdaa sidan oo kale: dadku waxay ka helaan lammaane naftiisa shabakadaha elektarooniga ah. Tusaalooyin fara badan, markii wax si guul leh uga soo dhex muuqday internetka dadka isticmaala, waxay isu beddeleen shirar durba xaqiiqda ka jiray. Xidhiidhka noocan ahi waxay leeyihiin, sida caadiga ah, dariiqa keliya: sii socoshada, ka qayb qaadashada iyo ugu dambayn - guurka. In ka badan boqollaal kun oo qoys oo adduunka jooga ayaa ku mahadsan hal-abuurnimada farsamada. Qof kastaa wuu ku dhici karaa jacaylka adoo adeegsanaya goobta shukaansiga, golaha ama ku sheekaysiga fiidiyowga qaab macno ahaan loo hagaajiyay. Haddii ay jirto dareen cidlo ah, dib ha u dhigin waxa hadda la sameynayo illaa berri - rumayso awoodahaaga, si dhab ah ugu dhowaaw raadinta wehel / wehel. Waxaan caawin doonnaa intii aan kari karno; waxaad si buuxda u isticmaali kartaa bartayada. Wada sheekaysiga waxaa loogu talagalay maalinta, habeenka iyo raadinta caadiga ah (horay ayaan u sheegnay - runtii waxaa jiri kara dad wanaagsan oo isku fikrad ah, saaxiibo).Kuwani maahan ereyo oo keliya, i rumee, wax walbana waa run! Fursadu waxay ku jirtaa rajada ugu weyn! Looma diidin in bilowga nolol cusub oo aad la wadaageyso midka aad jeceshahay ay tahay inaad noqonayso isticmaale ka sheekaysiga fiidiyowga luqadda Ruushka ugu caansan iyo in kale? Waxay u egtahay in booqdaha noocan oo kale ahi uu yahay mid cidla ah sida adiga oo kale indhihiisa oo aan go'aan ku gaarin - wuxuu buuxiyaa aagagga su'aalaha, isagoo rajeynaya inuu la kulmo ruux ehel ah, dhimbilo ayaa ka muuqan doona indhihiisa, waxaa jiri doona macno dheeraad ah oo jacayl ah adduunyada. Waxa ugu muhiimsan maahan inaad gacantaada u ruxdo weedh doqon ah: "tani ma dhacdo" - ma ogtahay? Tijaabi aakhiradaada dhabta ah. Waxay u badan tahay, adiga oo horey u qaaday talaabo, qaddarka ayaa kuu imaan doona adiga iyo kooxda dabeecada wanaagsan ee mashruuceena waxay kor u qaadi doonaan hal galaas oo macaan, macaan, khamri cad oo dhalaalaya ah oo caafimaad wanaagsan, fayoobaanta qoyska ...Looma diidin in bilowga nolol cusub oo aad la wadaageyso midka aad jeceshahay ay tahay inaad noqonayso isticmaale ka sheekaysiga fiidiyowga luqadda Ruushka ugu caansan iyo in kale? Waxay u egtahay in booqdaha noocan oo kale ahi uu yahay mid cidla ah sida adiga oo kale indhihiisa oo aan go'aan ku gaarin - wuxuu buuxiyaa aagagga su'aalaha, isagoo rajeynaya inuu la kulmo ruux ehel ah, dhimbilo ayaa ka muuqan doona indhihiisa, waxaa jiri doona macno dheeraad ah oo jacayl ah adduunyada. Waxa ugu muhiimsan maahan inaad gacantaada u ruxdo weedh doqon ah: "tani ma dhacdo" - ma ogtahay? Tijaabi aakhiradaada dhabta ah. Waxay u badan tahay, adiga oo horey u qaaday talaabo, qaddarka ayaa kuu imaan doona adiga iyo kooxda dabeecada wanaagsan ee mashruuceena waxay kor u qaadi doonaan hal galaas oo macaan, macaan, khamri cad oo dhalaalaya ah oo caafimaad wanaagsan, fayoobaanta qoyska ...Looma diidin in bilowga nolol cusub oo aad la wadaageyso midka aad jeceshahay ay tahay inaad noqonayso isticmaale ka sheekaysiga fiidiyowga luqadda Ruushka ugu caansan iyo in kale? Waxay u egtahay in booqdaha noocan oo kale ahi uu yahay mid cidla ah sida adiga oo kale indhihiisa oo aan go'aan ku gaarin - wuxuu buuxiyaa aagagga su'aalaha, isagoo rajeynaya inuu la kulmo ruux ehel ah, dhimbilo ayaa ka muuqan doona indhihiisa, waxaa jiri doona macno dheeraad ah oo jacayl ah adduunyada. Waxa ugu muhiimsan maahan inaad gacantaada u ruxdo weedh doqon ah: "tani ma dhacdo" - ma ogtahay? Tijaabi aakhiradaada dhabta ah. Waxay u badan tahay, adiga oo horey u qaaday talaabo, qaddarka ayaa kuu imaan doona adiga iyo kooxda dabeecada wanaagsan ee mashruuceena waxay kor u qaadi doonaan hal galaas oo macaan, macaan, khamri cad oo dhalaalaya ah oo caafimaad wanaagsan, fayoobaanta qoyska ...in booqdaha noocan oo kale ahi yahay cidla 'sidaad oo kale indhihiisa oo aan go'aan ku gaarin - uu buuxiyo meelaha su'aalaha la weydiinayo, isagoo rajeynaya inuu la kulmo ruux ehel ah, dhimbilo ayaa ka soo muuqan doona indhihiisa, waxaa jiri doona macno dheeraad ah oo ah inaad naftaada jeclaato adduunka. Waxa ugu muhiimsan maahan inaad gacantaada u ruxdo weedh doqon ah: "tani ma dhacdo" - ma ogtahay? Tijaabi aakhiradaada dhabta ah. Waxay u badan tahay, adiga oo horey u qaaday talaabo, qaddarka ayaa kuu imaan doona adiga iyo kooxda dabeecada wanaagsan ee mashruuceena waxay kor u qaadi doonaan hal galaas oo macaan, macaan, khamri cad oo dhalaalaya ah oo caafimaad wanaagsan, fayoobaanta qoyska ...in booqdaha noocan oo kale ahi yahay cidla 'sidaad oo kale indhihiisa oo aan go'aan ku gaarin - uu buuxiyo meelaha su'aalaha la weydiinayo, isagoo rajeynaya inuu la kulmo ruux ehel ah, dhimbilo ayaa ka soo muuqan doona indhihiisa, waxaa jiri doona macno dheeraad ah oo ah inaad naftaada jeclaato adduunka. Waxa ugu muhiimsan maahan inaad gacantaada u ruxdo weedh doqon ah: "tani ma dhacdo" - ma ogtahay? Tijaabi aakhiradaada dhabta ah. Waxay u badan tahay, adiga oo horey u qaaday talaabo, qaddarka ayaa kuu imaan doona adiga iyo kooxda dabeecada wanaagsan ee mashruuceena waxay kor u qaadi doonaan hal galaas oo macaan, macaan, khamri cad oo dhalaalaya ah oo caafimaad wanaagsan, fayoobaanta qoyska ...qaddarka ayaa kuu imaan doona adiga iyo kooxda dabeecadda wanaagsan ee mashruuceena waxay kicin doonaan hal galaas oo macaan, macaan, dhalaalaya khamri cad oo caafimaad wanaagsan, fayoobaanta qoyska ah ...qaddarka ayaa kuu imaan doona adiga iyo kooxda dabeecadda wanaagsan ee mashruuceena waxay kicin doonaan hal galaas oo macaan, macaan, dhalaalaya khamri cad oo caafimaad wanaagsan, fayoobaanta qoyska ah ...
Ku qaadashada waqtiga firaaqada qaabkan, ka dib maalin adag oo shucuur ka buuxo, ayaa ka wanaagsan inaad eegto saqafka fidsan ee quruxda badan oo aanad garanayn waxa la sameeyo inta lagu caajiso. Waxaad fursad weyn u leedahay inaad la kulanto dad wanaagsan, soo jiidasho leh adigoon aqalkaaga ka bixin. Xaalad xun, xaalad xun, gabi ahaanba ma jiraan wax xoog ah oo dibedda loogu baxo socod, laakiin naftu waxay u baahan tahay inay u ogolaato inay siibato, nasato ... Waddada waxaa ku yaal cimilo xumo, biyo qabow, roob, kuleyl ... halkii aad ka dooran lahayd fursado - ama seexo ama ku furo websaydhada laba guji oo jiir ah. La xiriir, sameyso saaxiibo cusub, waxa ugu weyn maahan inaad si ficil la'aan ah u fadhiisatid afar darbi gudahood, adigoo waqtigaaga ku lumaya telefishinka tuubada, oo aad daawaneyso daqiiqad kasta oo bilaash ah Waxay noqon doontaa wax aad u wanaagsan oo xiiso leh bilowgii - waxaad arki doontaa muuqaalka asxaabta dhinaca. Waxay u maleynayaan inay kujiraan jacayl ama isbedel weynlaakiin cidina ma sheegi karto inay si fudud ugu dhex jiraan internetka. Dhawr sano ka hor - Kama fikirin dalab inaad la kulanto. Sidee loo sameeyaa xiriir lala yeesho ajaanibta iyada oo loo marayo boqollaal kun oo kiilomitir, iyadoo la is arko? Adigoon ka bixin gurigaaga - waxaad ku raaxeysan kartaa waqtigaaga adoo isticmaalaya sheeko fiidiyoow ah oo aan kala sooc lahayn.
By the way, ma xasuusto inaan go'aansanay inaan diirada saarno qaabkan.Ma katagtid gurigaaga. Waxaan kugula talin karnaa wadahadal fiidiyow ah kalsooni, daryeel iyo adkeysi! Ma jiro kharashyo kale oo la heli karo oo loogu talagalay wadada ama khidmadaha, ugu yaraan waqtiga, dadaalka, tamarta - ee farahaaga. Jimicsiga ka dib, waad ka daashay inaad tagtid meelna, laakiin dhulkaaga, markii soo jiidasho leh, jinsi ah, qaabab soo jiidasho leh ay soo jiidan doonaan dadka dhinaca kale ee shaashadda, horay ayaad u arki kartaa, sax? Wadahadalka wuxuu jeclaan doonaa sida saaxiib dhisme wanaagsan uu ugu dhoolla caddeeyo kamaradda. Qofna ma ogaan doono inaad lug ku dhutineyso, ama inaad muruq jiidday ... Ma cabbin kafeega. Heerkulka? Way adag tahay in la qiyaaso. Qofna ma awoodi doono inuu cudurka qaado. Xaqiiqdii, tani waa horumar laga gaadhay adduunka! La kulan oo si waalli ah u faraxsan!
Goobta aad hadda ku sugan tahay waxaa soo saaray shirkadda Videoruletka, dalabkuna waa mid ay leedahay shirkadda Incasporated by Badanga Limited., Tel. +66865819983. Shirkaddan weyn waxay ka kooban tahay khibrad leh, xirfadlayaal aqoon u leh qaybta tikniyoolajiyada Internetka iyo softiweerka (oo laga tarjumay luuqadda barnaamijka: softiweerka). Qiimaha runta ahi wuxuu ka kooban yahay shaqaale, karti, aqoonta ganacsigooda - ha uga tagin danayn shaqada ay qabteen. Waad ku mahadsan tahay shaqo adag, dadaal - maanta waxaan ku raaxeysan karnaa shaqeynta tayada sare leh ee arjiga: videochat. Rabitaanka hagaajinta adeegga macaamiisha waa la ogaan doonaa si kasta. Shaqada waa la qabtaa maalin kasta, isbeddelada ayaa muuqda 2-3dii biloodba mar. Haddii, markii aad dooranaysid fasallada loogu talagalay madadaalada, indhahaagu waxay ku dhaceen sheekadeena fiidiyowga, markaa waad fahmaysaa tayada sare ee adeegga, sahlanaanta isticmaalka.Shaqadeenu waxay ku siineysaa dammaanad inaad adeegsan doonto oo keliya adeegyo tayo sare leh, u fiirso nidaam si fiican u shaqeynaya goobta iyo faa'iido wax ku ool ah. Videoruletka - yaa daneynaya muuqaalkooda iyo dareenka soo booqdayaashooda. Hubso inaad isticmaalayso oo keliya adeegyo tayo leh oo dammaanad qaad ah oo ka imanaya horumariyayaal la isku halleyn karo oo u hoggaansamaya heshiiska isticmaalaha.u hogaansanaanta heshiiska isticmaalaha.u hogaansanaanta heshiiska isticmaalaha.
Ma waxaad raadineysaa hab deg deg ah oo aad kula kulanto gabar caqli badan oo qurux badan? Wada sheekaysiga websaydhka roulette CoMeet (nooca Ingiriisiga ah ee CooMeet) wuxuu kuu oggolaanayaa inaad kula xiriirto haweenka ka kala yimid dalal kala duwan adigoon gurigaaga ka bixin. Xidhiidh dhakhso leh, wicitaano fiidiyow oo qeexan oo tayo sare leh, culeys la'aan iyo kaliya wada-hadalka ugu fiican oo had iyo jeer la kulma dhoola caddeyn.
Waan ognahay sida waqtiga maanta qiimaha leh u yahay: waxaa si joogto ah loogu qasbay inaan mudnaanta siino, badbaadinno oo aan ku deg degno, walina waqti uma haysano inaan ku qabano wax walba oo aan qorsheynay. Qalalaasahaan, shukaansiga iyo xiriirada badanaa waxay ku libdhaa asalka. Websaydhka rasmiga ah ee Kumit wuxuu dammaanad qaadayaa isgaarsiin tayo sare leh oo kaliya gabdhaha la xaqiijiyay - kulamada khadka tooska ah, dadka aqoonta u leh iyo niyadda weyn.
Qof kasta oo xiiseynayey roulettes-ka internetka ayaa laga yaabaa inuu xasuusto sheekooyinkaas taagan ee ku saabsan asalka isgaarsiinta aan kala sooca lahayn. Kuwani waxay ahaayeen Omegl iyo ChatRulet, oo soo muuqday 2009-kii. Kii ugu horreeyay wuxuu nooga yimid dibedda, tan labaadna waxaa iska lahaa wiilka Ruushka ee iskuulka Andrey Ternovsky.
Labada websaydh waxay ku saleysnaayeen isla mabda'a: isgaarsiinta lala wadaago bakhtiyaanasiibka oo ka socda adduunka oo idil. In kasta oo Omegle madax u ahaa bilaw dhawr bilood ah, haddana wuxuu ahaa ChatRoulette oo xukumayey bandhigga muddo dheer. Si kastaba ha noqotee, labadaba sheekaysiga si aan kala sooc lahayn ayaa ku dhammaaday isla "cudur" isku mid ah, oo weli dhibaato ah oo dad badan ka niyadjabaya inay isticmaalaan.
Tani, dabcan, waa nuxur aan habboonayn. Adduunyada ku habboon, dadka wanaagsan ee saaxiibtinimada leh waa inay soo galaan shaashadda fiidiyowga ah, ee doonaya inay is bartaan, isgaarsiiyaan, oo midba midka kale siiyo niyadda weyn. Dhab ahaan:
isku xirka soo socda ayaa ku siin doona fursad aad ku raaxeysato muuqaal muuqaal ah ama fiidiyoo leh waxyaabo xayeysiis ah oo keliya. Haa, dadka PR ma diidi karaan khiyaali.